समाचार – Ap Nepal
✍सुलभ रिजाल-मुनाफ हुसेन /इनरूवा –बर्षाको समयमा सुनसरीको इनरुवा देखि कोशी ब्यारेज सम्मको राज मार्गमा हुने सवारी दुर्घ' टनालाई कम गर्न कोशी गाउँपालिका लौकाही ट्राफिक प्रहरीले गाडी चालक र यात्रुहरुलाइ बर्षाको समयमा सडक शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरी सडक दु'र्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतना गराइदै छ । बर्षाको समयमा सडक चिप्लो हुनुका साथै राम्रोसँग बाटो पनि देखिन्न । राजमार्गमा हुइकिने बाइक होस या सार्बजनिक सबारीको साधन लौकाही ट्राफिक प्रहरीले रोकेर सचेत गराउने गरेको छ। सचेत गरेउदै ट्राफिक प्रहरी.. यस्तै ...बिहीबार बिहान करिब साढे ८ बजे झमझम पानी परिरहँदा कामविशेषले चाबहिलतर्फ जाँदै थिए प्रदीपजंग कार्की । गौशाला चोकमा रेडलाइट बलेपछि उनले बाइक रोके । ट्राफिक जाममा रोकिएकै बेला छेउमा सरकारी गाडी चढेका व्यक्तिले उनलाई अगाडि हेर्न इशारा गरे । ठीक आफ्नो अगाडि हेर्दा
काठमाण्डौँ । काठमाण्डौँ महानगरपालिकाको फोहर ब्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । फोहरकै कारण काठमाण्डौँ र नुवाकोटको सम्बन्ध चिसिन पुगेको स्थितिकाबिच अहिले स्थानीयसंग सहमति गरेर बञ्चरे डाँडामा फोहर फाल्न महानगरले अनुमति पाएको छ । त्यसपछि यो झगडा सामसुम छ । महानगरले पनि यो फोहरको स्थायी ब्यवस्थापनबारे बजेटमै व्यवस्थापन गरेर नीति बनाउँदै छ । महानगरले फोहर ब्यवस्थापनको विषयमा झेलेको समस्याबारे धरान उपमहानगर पालिकाका स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ राईले पनि बालेन्द्र शाहलाई सुझाएका छन् । अन्य विषयमा यी दुई स्वतन्त्र मेयरबीच खासै कुराकानी र भेटघाट भएको भने देखिदैन । यस्तो अवस्थाकाबीच हर्कले बालेनलाई फोहरबारे सुझाएका हुन् । एक टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै उनले भनेका छन् ‘मेरो एउटा सल्लाह मिडियामार्फत् के छ भने त्यो बन्चरे डाँडामा आन्दोलन गर्दै त्यो गरिराख्नुभन्दा त्यहाँका मान्छेलाई सट्टा
Posted in आर्थिक समाचार, समाचार
काठमाडौ । लामो समयदेखि घाटा ब्यहोरी रहेको नेपाल आयल निगम टाट पल्टिएको छ । भारतबाट महँगोमा तेल किनेर नेपालमा घाटामा बेचिरहेको निगम टाट पल्टिएको हो । पूर्णरुपमा आर्थिकरूपमा कमजोर बनेपछि जग्गा धितो राखेर अर्बौ रुपैयाँ ऋण​ लिने भएछ । त्यसका लागि निगमले केन्द्रीय कार्यलय रहेको टेकुको ४० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा धितोमा राख्ने स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण​ लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निगमलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई दिनु पर्ने ३ अर्ब सोधभर्नाको रकम लिन जग्गा धितोमा राख्न भनिएको छ । यो पनि.. आज असार १३ गते सोमबार । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १२५.०६ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर १२५.६६ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै युरोपियन युरो एकको खरिद दर १३२.०१ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्री दर
कैलाली र कञ्चनपुरमा आज बिहान च,ट्याङ लागेर चार जनाको मृ, त्यु भएको छ । कैलालीमा दुई र कञ्चनपुरमा दुई जनाको खेतमा काम गरिरहेका बेला चट्याङ लागेर मृ, त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–१ रानामुरा गाउँ बस्ने ५६ वर्षकी सुगपंखीदेवी चौधरीको बिहान ८ बजे खेतमा काम गरिरहेका बेला चट्याङ लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले बताए । उनका अनुसार चट्याङ लागेर घाइते भएकी चौधरीको उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी ल्याउने क्रममा बाटोमै मृ, त्यु भएको डीएसपी जोशीले बताए । यस्तै कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका–३ मालाखेतीमा पनि चट्याङ लागेर एक जनाको मृ, त्यु भएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–५ का ४८ वर्षीय पुनाराम चौधरीको मृ, त्यु भएको हो । मालाखेती रेडियन्ट ग्यास कम्पनीको जमिनमा धान रोप्न आएका उनको चट्याङ लागेर आज बिहा
Jun262022 by adminNo Comments
लोकदोहोरी गायिका दिलमायाको मृ’ त्युबारे धेरै संकाहरू देखिए , त्यो रात के-के भयो ? (भिडियो सहितको रिपोर्ट )
काठमाडौं – लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनार मृ,त भेटिएकी छिन् । काठमाडौंको तारकेश्वर-११ नेपालटारस्थित डेरामा उनी शनिबार बिहान मृ,त भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस स्टाटसमा आफूले नै यो कदम चालेको र कसैलाई दोष नदिन अनुरोधसमेत गरिएको छ, तर स्टाटसभन्दा घटना प्रकृति निकै फरक रहेको र आ त्मह' त्या जस्तो नदेखिएको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ । शुक्रबार राति दिलमायाले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यसमा उनले आफ्नो मृ,त्युमा कसैलाई दोष नदिनु भनेकी छन् । यस्तो छ उनले लेखेको नोट नमस्कार सबै जनामा मिठो सम्झना छ । जिन्दगीमा उचारचढाव धेरै भोगेँ । तर जब म जान्ने भए अनि म एक्लो भएँ । कसैको माया माया पाउन जति कोसिस गरे पनि सकिनँ । तर पनि हार खाइनँ । तर ऐले धेरै गाह्रो भयो । म बाचेर पनि दिनदिनै म,र्न सकिनँ । आमा तिम्री छोरी धेरै थाकिछे
गायक धीरज राई धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङ एक साथ
काठमाडौं । गायक धीरज राई धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङलाई बुद्धको मुर्ति उपहार दिएका हुन् । गायक राईले मेयर साम्पाङलाई धरान गएरै आइतबार बुद्धको मुर्ति दिएका हुन् ।गायक राई ‘बुद्ध वाज वर्न इन नेपाल’ अभियानका अभियन्ता हुन् । यो पनि... धरानका मेयर हर्क साम्पाङले बिचौलियाहरूको ढाड सेक्ने गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट ल्याएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा बिचौलियाहरूको चलखेल भएको भन्दै यो वर्षको बजेटमा त्यसलाई कटौती गर्दै यस्तो बजेट ल्याएको बुझिएको छ । यही कुरालाईलाई मध्यनजर गर्दै बजेटलाई सहि सहि ठाउँमा सदुपयोग गरेर बिकाशमा लगाउन उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि १ अर्ब ६८ करोड ५८ लाख २३ हजारको अनुमानित बजेट पेश गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ३ करोड ६४ लाखको आय व्यय अनुमान गरेको थियो । यथार्थ खर्च भने १ अर्ब ८ करोड
आफ्नै कोठामा मृ त फेला परिन दोहोरी गायिका दिलमाया सुनार
काठमाडौ । लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनार (वि.क.) आफ्नै कोठामा मृ त अवस्थामा फेला परेकी छिन् । सुर्खेत घर भई हाल काठमाडौंको नेपालटारमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी सुनार शनिबार बिहान आफ्नै कोठामा मृ' त भेटिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले जनाएको छ । १०ः ४५ बजेको समयमा कोठामा खाटमै सुतेको अवस्थामा उनलाई मृ.त भेटिएको हो । गायिका दिलमायाले शुक्रबार राति आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको भन्दै फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेकी थिइन् । स्टाटस लेखेको भोलिपल्ट उनी मृ त अवस्थामा भेटिएकी हुन् । घटनाबारे अनुसन्धान कार्य चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । राजु परियार लगायत केही गायकसँग केही गीतमा स्वर दिएकी सुनार विशेष त लाइभ दोहोरी गायनमा बढी सक्रिय थिइन् । उनी केही महिना अघि सम्पन्न राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगितामा उत्कृष्ट गायिका घोषित भएकी थिइन् । उनले यसवर्ष केही तीज गीतहरु समेत रेकर्ड गरेको र ती सार्वज
Jun252022 by adminNo Comments
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । सत्ता गठबन्धनको वैठकले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती गर्न निर्देशन दिए लगत्तै मुल्य घटाइएको हो । गठबन्धनले सरकारलाई र सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती गर्ने निर्देशन दिएका थिए । निगमको शनिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो । यसअनुसार अब पेट्रोलको मूल्य १७९ निर्धारण हुनेछ भने डिजेल/मट्टितेलको १६३ कायम हुनेछ । घटेको मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ ।
सेवाग्राही माथि अभ:द्र व्य’ वहार गर्ने नायब सुब्बा प्रहरी फन्दामा
सिरहा, ९ असार /लहानस्थित रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारकका (राउ) स्मारक अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । सेवाग्राहीमाथि दुर्व्यवहार र अश्लील गाली गरेको आरोपमा नायब सुब्बा बासुदेव महतो पक्राउ परेका हुन् । सेवा सुस्त भएको भन्दै एक सेवाग्राहीले नासु महतोसँग गुनासो गर्न जाँदा सामान्य भनाभन भएपछि उनले दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ । डिएसपी कुमार मैनालीले उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि गरे । बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश नेपालगञ्ज, ९ असार (रासस) : उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले कोरोना बीमाबापतको रकम दिन विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ । कोरोना बीमासम्बन्धी रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नेपालगञ्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बीमा कम्पनीको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकको पक्षमा अध
नेकपा(माओवादी केन्द्र) की सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदीले १० वर्षभन्दा कम उमेरको बा’लिकालाई ब’ला’त्का’र गर्नेलाई मृ’त्यु’द’ण्ड दिइनुपर्ने बताएकी छन्।उनले कानून बनाएपनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड समेत दिइन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा स’जाय र जरिवानालाई निकै कडा बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘कानून बनाउँछौ, कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ। दश वर्षभन्दा तलको बालिकाको हकमा बा’लिकाहरुलाई ज’र्बजस्ती ब’ला’त्का’र गर्नेहरुलाई त मृ’त्यु’द’ण्ड दिनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत विचार। यो विषयमा कडा भन्दा कडा कानून हुनुपर्छ। कैद र जरिवाना दुवै राख्नुपर्छ। कडाभन्दा कडा सजाय र जरिवाना गरेर नै जानुपर्छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा पनि बढाउनुप¥यो : आपूर